GTA: San Andreas ine chakakosha dhisikaundi kune yakatemwa nguva | IPhone nhau
Kazhinji tinoda kukurudzira kunyorera uye iwe unozviziva, pamwe needu watinoshanda naye Ignacio Sala anova nechokwadi chekuti iwe unotora mukana kune ese emahara kunyorera kwenguva yakaganhurirwa. Asi panguva ino isu ticha taura nezve kunyorera kuti, kunyangwe ichiri kubhadharwa, mutero wakakosha zvekuti tinomanikidzwa kuugovana newe. Iyo Rockstar Mitambo timu yakaona zvakakodzera kuita yakakosha kudzikisira mu Grand Theft Auto: San Andreas, inova imwe yemitambo yakanakisa yesaga rese. Izvo zvakakodzera here kurodha pasi neakadaro dhisikaundi? Pasina mubvunzo, hongu.
Kune avo vasingazive (izvo zvatinopokana nazvo), iyi ndiyo nyaya:
Makore mashanu apfuura, Carl Johnson akasiya hupenyu hwake kumashure muLos Santos, San Andreas, guta rinodyiwa nezvikwata zvemumugwagwa, zvinodhaka nehuwori. Guta rine nyeredzi dzemuvhi uye mamirionea vanoita napose pavanogona napo kudzivirira vatengesi vezvinodhaka uye zvikwata.
Isu tiri mukutanga kwemakumi mapfumbamwe uye Carl anofanira kudzoka. Amai vake vakapondwa, mhuri yavo iri kuparara, uye shamwari dzake dzehudiki dziri munzira isiriyo.
Paakadzokera kunharaunda yake, mapurisa akati wandei anomupomera mhosva yekuponda. CJ anodhonzwa parwendo rwunomutora kuyambuka ese San Andreas kununura mhuri yake uye kutora kutonga kwemigwagwa.
Rockstar Mitambo inopa yayo hombe nhare kuburitswa zvakadaro iine rakakura rakavhurika nyika iri musha kudunhu reSan Andreas nemaguta ayo matatu makuru: Los Santos, San Fierro uye Las Venturas; nekuvandudzwa kwekuona kuvimbika uye anopfuura maawa makumi manomwe emutambo.
Mutambo wakanaka inobata 2GB kwete zvishoma, asi iri sandbox ine mirau yese, pamusoro pezvo, ndiwo mutambo uyo unogadziriswa kubva kunyaradzo kuenda kune nhare inopupurira basa rakanaka reRockstargames. Mutambo unowanzoita € 6,99, asi nhasi ingori € 2,99 chete, saka zvakakodzera kurodha pasina kuzengurira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » GTA San Andreas ine chakakosha dhisikaundi kune yakatemwa nguva
Ndakaitenga 3-4 makore apfuura uye pane nguva yaunomira kuishandisa, inodya yakawanda yebhatiri uye iyo iDevice inopisa. Ini handizive, ndeyemunhu, asi izvozvi ndaizodzosera kutenga.
Yakanaka yekare vhezheni. Ini ndinofunga ndiko chete kudzikisira izvo, zvirokwazvo hakuchazove nekumwe kugadziridzwa. Ndatenda, asi handichatenga.
Patent hondo, Samsung uye faindi yekuteedzera iyo "Swipe kuvhura"